Vanyori vakanganwa | Zvazvino Zvinyorwa
Zvinonzwika kunge zvinopokana. Ini ndanzwa apo neapo munyori achitaura kuti chimwe chekurudziro yake pakunyora ndeyekusiira chimwe chinhu kune ramangwana, zvekuti rinosara mushure mekufa kwake. Ndokunge, vanonyora muchidimbu nechimwe chisina maturo uye chiito chekunyepedzera (icho chinoremekedzwa) kuitira kuti mushure mekufa kwavo, chimwe chinhu chavo, chimwe chinhu chavo chichagara nekusingaperi, uye neimwe nzira, vanozoyeukwa nezvazvo . Uye kudzokera kumutsara wekutanga wandanyora, zvinoita sekunge zvinopesana, nekuti chinyorwa chandinokuunzira nhasi chinoshamisa kubva kuvanyori vaviri veAmerica uye munyori weAustria atokanganwa.
Ini ndaigona kutaura zvakati wandei zvimwe, asi atove mumwe wangu Alberto Piernas akaita zvakanaka kwazvo mune izvi chinyorwa izvo zvandinokurudzira, kwaanotaura vamwe vashanu vanyori vakanganwa. Mune yangu nyaya, ndinokuunzira zvishoma zvehupenyu nebasa revanyori vatatu veAmerica vatisingatomboyeuke nezvavo: Vicki Baum, Erskine Caldwell, naPearl S. Buck.
1 Ndiani aive Vicki Baum?
2 Erskine Caldwell
3 Pearl S. Buck
Ndiani aive Vicki Baum?
Vicki Baum (1888-1960) aive wekuAustria nekuzvarwa, asi kutya kweNazi kwakamutungamira kuti akurumidze kuenda kuUnited States, kwaakafirawo. Iwe unoziva kuti Greta Garbo aive ani, handiti? Zvakanaka, ndiye iye akapa hupenyu cinematrographically achitaura kune mumwe munhu mubhuku rake Grand Hotel. Munyori uyu akanyora zvinyorwa zvishoma, zvizhinji zvacho zvine chekuita nekufamba kwake uye kusangana kwake.
Yakanga ichibvunzwa nekushoropodzwa sekurumbidzwa kwayakaitwa Chikamu chevatsoropodzi vakafunga nezve rake rekunyora basa kuti raive risingakoshi uye nehusimbe, zvisinei chimwe chikamu, chakataura nezvake uye nezvake zvinyorwa kuti vaive vakasimba uye vakapiwa hunhu hukuru.
Uyu munyori akazvarwa muGeorgia muna 1903 uye akafa muna 1987. Iye anozivikanwa pamusoro pezvose nebasa rake rine mukurumbira "Zano raMwari" (1933), iri pakati pekumaodzanyemba kweGothic uye mabhuku ehondo. Chii chakaitika kumunyori uyu uye ndosaka asinganyatso kuzivikanwa nhasi ndechekuti akafukidzirwa panguva iyoyo nevamwe vanyori vakuru venguva iyoyo: William Faulkner naJohn Steinbeck.
Izvo hazvina kana kukanganisa kwezuva rake kana zvakare zvakazove nazvo paari. Yakabuditswazve nemuparidzi Navona asi isina kubudirira zvakanyanya.
Nyaya yemunyori weAmerica Pearl S. Buck (1892-1973) inotonyanya kunetsa, nekuti zvirinani akahwina iyo Mubayiro weNobel muMabhuku muna 1938.
Pearl akapedza makore makumi mana ehupenyu hwake achigara kuChina. Kubva kunyika yekumabvazuva akakwevera kusingaperi kwezviitiko pamabasa ake uye hunhu hwake hwakagamuchirwa neiyi Nobel Prize yeMabhuku. Yakaburitswa kwemakore mazhinji asi kwakauya nguva apo vakarega kuzviita, nenzira isingatsanangurike zvachose. Kusvikira nhasi, hapana muparidzi wechiSpanish akambotora munyori uyu kuti azviite zvakare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori vatokanganwa
Manuel Augusto Bono akadaro
Kwete chete kuti handina kuvakanganwa, asi dzimwe nguva ndaizviverengazve, kunyanya iye munyori anoshamisa aive Pearl S. Buck.
Pindura kuna Manuel Augusto Bono
Ndakave nerombo rakanaka kuwana bhuku rekuunganidzira raPearl S. Buck zvinyorwa mune chitoro chinotengesa nguva pfupi yapfuura uye zvinotaridzika kunge zvakanaka. Kutenda nekurangarira vanyori ava. Akanga asingazivi Baulm naCaldwell.
Sergio Camargo akadaro
Erski e Caldwell: basa rakasarudzika muNorth America South, ine guruva remumigwagwa, yakanyanya kusarurana uye rakakura script. Makorokoto.
Pindura Sergio Camargo
25 mazwi erudo kubva kuvanyori vakakura vezvinyorwa zvepasirese
Barcelona Negra 2017. Kuvhara kwemutambo. Tinoongorora.